Australia Archives - 24 News Press
गैह्र आवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा नन्द गुरूङ , महासचिबमा राजु अधिकारी
गैह् आबासीय नेपाली संघ,अष्ट्रेलियाको अध्यक्ष पदमा नन्द गुरूङ बिजयी भएका छन । एनआरएनए अष्ट्रेलियाको अध्यक्ष पदम...
मिस नेपाल अनुष्कालाई भोट गरि सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाबासी नेपाली समुदायमा अपिल
सिड्नी: डिसेम्बरमा १४ तारिखमा बेलायतमा हुन लागिरहेको मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट मिस नेपाल अनुष्क...
एनआरएन अभियानका लागि एक करोड सहयोग गर्नेमा निवर्तमान अध्यक्ष शेष घले र केन्द्रीय उपाध्यक्ष पन्त
अस्ट्रेलिया, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकाल २०१९–२०२१ का अध्यक्ष पदका उम्मेद्...
रञ्जुद्वारा अष्ट्रेलियाबाट एनआरएनए महिला उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा
काडमाण्डौँ । गैर आवासीय नेपाली संघको नवौं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशसनमा अष्ट्रेलियाबाट बासोवास गर्दै आएकी रन्जु व...
तिक्ष्ण बुद्धी,शालीन तथा आज्ञाकारी कुमार पन्त केन्द्रीय अध्यक्षमा नै किन
शिव बन्जारा,अष्ट्रेलिया अष्ट्रेलिया – गोरखाको फुजेलमा सामान्य परिबारमा सन् १९७६ मा जन्मिनु भएका कुमा...
धर्मराज अधिकारीलेअक्टोबरमा हुने महाधिवेशनका लागि उपाध्यक्षमा पदमा उम्मेदवारी दिने
इटाली – धर्मराज अधिकारी, गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्रा्ष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ओशिनिया संयोजक हुन् । न...
तीन बालबालिकाको मृत्यु
एजेन्सी, ११ असार । अस्ट्रेलियाको एक घरमा आगलागी हुँदा तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान साढे तीन बज...
Posted By: 24 News Presson: July 31, 2021
गैह् आबासीय नेपाली संघ,अष्ट्रेलियाको अध्यक्ष पदमा नन्द गुरूङ बिजयी भएका छन । एनआरएनए अष्ट्रेलियाको अध्यक्ष पदमा गुरूगङसंग यसै पदमा डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । रेग्मी भने पराजित भएका छन ।
महासचिव पदमा राजु बाबु अधिकारी विजयी भएका छन् भने सचिव पदमा सन्ध्या शाहले ससफलता हात पारेकी छिन । यसैगरी आइसिसी सदस्यहरुमा बुद्धि डल्लाकोटी, पर्शुराम अधिकारी, प्रज्वल भट्टराई, राजेश बुढाथोकी, प्रेमप्रसाद कँडेल, सूर्य आचार्य, प्रवेशराज घिमिरे विजयी भएका छन् ।
Posted By: 24 News Presson: December 05, 2019
सिड्नी: डिसेम्बरमा १४ तारिखमा बेलायतमा हुन लागिरहेको मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठलाई धेरै भन्दा धेरै भोटको आवश्यक परेको छ । मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता नजिकिएसँगै तयारीमा जुटिरहनु भएको श्रेष्ठलाई धेरैभन्दा धेरै भोटको आवश्यक परेपछि सबैमा सहयोगको लागि अपिल गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज (इनास) ओसेनीया संयोजक सुशिल चालिसेले अनुष्कालाई भोट गरि सहयोग गर्न सम्पूर्ण अस्ट्रेलियाबासी नेपाली समुदायलाई अपिल गर्नुभएको हो । चालिसेले अनुष्कालाई यो बेला धेरे भन्दा धेरै भोटको आवश्यक पर्ने भन्दै सहयोगको लागि अपिल गर्नुभएको हो ।
लन्डनमा रहनु भएको अनुष्कालाई पहिलो चरणमा मिस वर्ल्डको मल्टी मिडिया अवार्ड जिताउन अर्थात टप २० भित्र पर्नको लागि सहयोगको आवश्यकता देखिएको हो । अनुष्कालाई मल्टीमिडिया अवार्ड जित्नको लागि लाईक र शेयरको आवश्यक पर्छ ।
Here are the voting details!!! Please show your support on:
1. The official Facebook page Miss World – Nepal
2. The official Instagram page @anshkashrestha
4. Vote for www.missworld.com
जसको लागि MOBSTAR! एप्स डाउन लोड गर्नुपर्नेछ । एप्स डाउन लोड गरिसकेपछि अनुष्का श्रेष्ठ सर्च गरि लाईक, शेयर गर्न सकिनेछ । जसले गर्दा भोट बढाउन सहयोग मिल्नेछ । यो जती धेरै लाईक अर्थात शेयर भयो त्यसलाई पनि मल्टीमिडिया अवार्ड छनौटमा एक आधार मानीने गरेको छ ।
अस्ट्रेलिया, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकाल २०१९–२०२१ का अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कुमार पन्तले संघको अभियानलाई आगाडि बढाउनका लागि एक करोड प्रदान गरेका छन् । संघका अध्यक्ष भवन भट्टको आग्रह अनुसार संघको खातामा एक करोड रुपैयाँ राखिदिएको उपाध्यक्ष पन्तले जानकारी दिए । संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको ठूला योजनालाई निरन्तरता दिन केहि आर्थिक कठिनाई परेकोले संस्थागत योजना र कार्यलाई जीवन्त बनाउने उद्देश्यले बिनासर्त सहयोग गरेको पन्तले बताए ।
‘संस्थाको आकार बढ्दै जाँदा जनअपेक्षाहरू पनि बढ्दै जान्छ र संस्था त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । एनआरएनएलाई धनी तथा ब्यापारीहरुको क्लब भनेर चर्चा गरिन्छ’, उनले भने, ‘तर संस्था संकटमा पर्दा यसलाई समाधान कसले गर्न सक्छ ? र समय कसले दिन सक्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण सबाल रहन्छ । त्यसैले अध्यक्षज्यूको आग्रहअनुसार सहयोग गरेको हुँ ।’
यसअघि निवर्तमान अध्यक्ष शेष घलेले गोरखा भूकम्पका बेला राहत, उद्धार, पुनस्थापना र पुनर्वासका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए ।
Posted By: 24 News Presson: September 06, 2019
काडमाण्डौँ । गैर आवासीय नेपाली संघको नवौं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशसनमा अष्ट्रेलियाबाट बासोवास गर्दै आएकी रन्जु वाग्ले थापालले आईसीसी महिला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन ।
शेष घलेको नेतृत्वमा हुँदा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेकी थापाले महिला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी हुन । आगामी अक्टोबर १५ देखि १७ तारिखसम्म काठमाण्डौंमा विश्व सम्मेलन हुने भएको छ ।
यस अघि भूकम्प पिडीत लाप्राक नमुना बस्ती र एनआरएनए भवन निर्माण साथै भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी आफ्नो एजेण्डा पारित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पूर्याएकी थापा लामो समयादेखि एनआरएनमा सकृय रुपमा लागि परेकी छन ।
राष्ट्रिय समन्वय परिषद अष्ट्रेलियाको संस्थापक महिला उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएकी थापाले महिला सशक्तिकरणमा विशेष पहल गर्नुको साथै विभिन्न देशमा महिला फोरम गठनमा समेत योगदान गरेकी छन ।
दुई पटक अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तरगत महिला उपसंयोजक बनेकी थापाले कुरा भन्दापनि काम गरेर देखाउने खरो स्वभावको थापाले २०११- २०१२ मा एनआरएनएको महिला संयोजक र २०१३-०१५ मा सचिवको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेकी छन ।
Posted By: 24 News Presson: August 08, 2019
अष्ट्रेलिया – गोरखाको फुजेलमा सामान्य परिबारमा सन् १९७६ मा जन्मिनु भएका कुमार पन्त तिक्ष्ण बुद्धी,शालीन तथा आज्ञाकारी बालब्यक्तित्व उहाँको असल परिचय थियो । अबसरको खोजिमा सपनाको सानो पोको बोकि सन १९९७ तिर जर्मन छिरेर जीवन एक सँघर्ष हो भन्ने आत्मसाथ गरि होटल लाईनमा जागिरे रूपमा आफ्नो प्रबासी जीवन यात्रा शुरू गर्नु भएका पन्तले आफ्ना ब्यक्तिगत जीवनलाई सहजतामा बदल्ने क्रममानै अब बिदेशमा रहेर मेरो ब्यक्तिगत पाटो मात्र होइन सामाजिक क्षेत्रमा पनि केहि गर्न आफ्नो भूमिका र दायित्व ठान्दै सन् २००४ मा प्रबास र माृभूमिलाई जोड्न गैर आबासिय नेपाली सँघ (NRNA) को यात्रामा सहयात्री भई समाहित हुनु भयो ।
एनआरएनएको यात्रामा पबित्र उद्धेश्य,सँस्था प्रति इमान्दार र मर्यादित हुदै यस सँस्थाको भौत्तिक बिकास र सँस्थाको दायित्वलाई फराकिलो बनाउन अझै आफ्नो जिम्मेवार बढेको महशुष गर्दै सन् २००५ मा हिसान क्षेत्रको संयोजकमा आफ्नो जिम्मेवारी सस्थाले गरेको अपेक्षा भन्दा पनि अब्बलताका साथ पुरा गर्नु भयो । यसले एन आर एनको यात्रामा अझै जिम्मेवार र माथिल्लो तहमा रहेर काम गर्ने उर्जा थपि दियो । यसै अनुरुप सन २००९ मा एनआरएनए अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा रहेर काम गर्ने ईच्छा जागृत भयो र उहाँको यस सँस्थाको यात्रामा केन्द्रिय तहमा महत्वपूर्ण जिम्मेवाारीका साथ सन् २०११ मा यूरोप क्षेत्रको क्षेत्रिय संयोजकमा काम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भयो ।
आफ्नो अनुभबको आधारमा होटल व्यबसायमा सफल प्रबासी नेपालीहरूको अर्को नयाँ अध्यायमा जर्मनको एक सफल ब्याबसायीको अर्को अध्याय थप्न सफल पन्त महत्वपूर्ण पारिबारिक र ब्याबसायिक समयलाई सामाजिक अभियानमा स्थान्तरण गरि सँस्थाले अपेक्षा गरेका उद्धेश्यहरूको प्रतिफल गुणात्मकनै रह्यो । यसले यात्राको दुरीहरू झनै फराकिलो र बिशिष्ट बनाउदै सँस्थालाई परिष्कृत र यस अभियानलाई अझै उचाईमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निरन्तर रहिरह्यो ।
एन आर एन ए अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई एक प्रणालीमा चलाउने संयन्त्रको बिकाशमा सुधार र सँस्थाको दायित्वलाई अझै फरक र बिशाल बनाउने उद्धेश्य अनुरूप सन् २०१३ मा महासचिब जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदमा रहेर आफ्नो २ बर्षको कार्यकाललाई ऐतिहासिक साबित गर्नुभयो । यस यात्राको अथक र अब्बल यात्रीको रूपमा आफूलाई बिश्वभर चिनाउन सफल हुनुभयो । यात्रा सगरमाथा र सँस्थालाई त्यो उचाईमा सफलताको ईतिहास रच्ने अभिलाषाले सन २०१५–१७ मा आफूलाई उपाध्यक्षको पदमा उभ्याएर अध्यक्षले गर्नुपर्ने बिभिन्न महत्वपूर्ण काममा आफूलाई परिक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भयो । सँस्थाको बिभिन्न अफ्टयारा परिक्षामा पास भैसकेर पनि सँस्थाको मर्म, अग्रजहरूको सम्मान, प्रतिस्पर्धी साथीहरूको आकांक्षालाई मध्यनजर गरी अध्यक्षको प्रत्यासी रहँदा रहदै त्यो पदीय दायित्व र जिम्मेबारको कुनै सेकेण्ड खेर नजाओस भन्ने गतिशिल सोंच बनाई बर्तमान अध्यक्षसँग कुनै राजनैतिक पूर्बाग्रह नराखी सहयात्री भबन भट्टलाई अध्यक्ष पदको लागि सहयोग गर्ने र अर्को कार्यकालमा आफुलाई सहयोग गर्ने गरि ब्यक्तिगत सहमतिको आधारमा हाल उपाध्यक्षको पदमा दोहोर्याएर सम्पूर्ण हिसाबले सुसज्जित भई केन्द्रिय अध्यक्ष पदको लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
बिश्वभर छरिएर रहेका लगभग ८० लाख नेपालीलाई ब्यक्तिगत तथा सामुहिक लगानी मातृभूमि नेपालमा गर्नु पर्छ भन्ने मुल मन्त्र राखी नेपालमा पनि बिभिन्न क्षेत्रका ब्यापार र उद्योगमा लगानी गर्नु भएको पन्त प्रवासी नेपालीहरूको भाबना,श्रम,सिप र पुँजिलाई मातृभूमिसँग जोडेर स्थापना कालदेखिनै एनआरएनएले घोषणा गरेको समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउन यसैबर्ष नेपाल सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा १० अर्बको लगानी एनआरएनएबाट सँस्थागत रूपमा भित्राउने गरि भएको हस्ताक्षरमा पनि उहाँको ठूलो भूमिका रहेको छ । एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने मातृभाबलाई आत्मबोध गर्दै बिदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार बाहेक अन्य अधिकार सहितको दोहोरो नागरिका पाउनुपर्छ भन्ने सबालमा नेपाल सरकारसँग यहाँको सँस्थागत पहल अतुलनिय रह्यो र फल स्वरूप बिधान राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको र प्रतिनिधि सभाबाट पारितको प्रतिक्षामा छ ।
संस्था र बिश्बभरका नेपाली समुदायको हितलाई शिरोपर गरि बिश्वका ८५ भन्दा बढि राष्ट्रको प्रत्यक्ष भ्रमण गरि बिभिन्न राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरूको बिभिन्न बिद्यामान समस्याहरूको न्यूनिकरण र समाधानको लागि गरिने प्रयासलाई सहज बनाउन हाल बिश्वभर अन्तिम समय गठित एन आर एन एको राष्ट्रिय परिषद माल्टा सहित ८० औ राष्ट्रमा आफ्नो सँजाल बिस्तार गर्न पनि यहाँको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रह्यो । हो त्यसैले अब कुनै जात,धर्म,क्षेत्र,लिङ्ग तथा कुनै राजनैतीक ध्रुबको आधारमा नभै एक कर्मठ,शालीन,सक्षम,अनुभबि र नेतृत्व शक्तिलाई आधार मान्ने हो भने आगामी अक्टोबरमा काठमाण्डौमा हुन गैरहेको ९ औ बिश्व सम्मेलनबाट केन्द्रिय अध्यक्षको लागि निर्बिरोध रूपमा कुमार पन्तलाई निर्वाचित गराउन आबश्यक छ ।
यस्तैगरी बिगतमा शुरू भएको भिजन २०२० लगायतका अन्य सस्थागत योजनाहरूको कार्यान्वयनको लागि पनि कर्मठ ब्यक्तित्व कुमार पन्तज्यूको नेतृत्व अपरिहार्य छ । आदरणिय कुमार पन्तज्यूलाई अग्रिम बधाई र यहाँको कार्यकाल ऐतिहासिक बनोस् शुभकामना !!
Posted By: 24 News Presson: August 06, 2019
इटाली – धर्मराज अधिकारी, गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्रा्ष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ओशिनिया संयोजक हुन् । नुवाकोटको तारुकामा जन्मिएका अधिकारी आजभन्दा २३ वर्षअघि अध्ययनको सिलसिलामा अस्ट्रेलिया प्रवेश गरेका अधिकारी हाल एनआरएनए अष्टे«लिया महादेश संयोजक पनि रहेका छन । साथै, अस्ट्रेलियामा सफल व्यवसायीको रूपमा अधिकारीले आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका छन् । अष्ट्रेलियामा डोमिनो पिज्जाको फ्रेन्चाइजी सञ्चालन गरिरहेका अधिकारी नेपाल र नेपालीकै लागि भएका कारण एनआरएनए अभियानमा सक्रिय भएर लागेको बताउँछन् । यही अगष्ट २ देखि ४ सम्म इटालीमा हुन लागेको बाह्रौ यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलन २०१९ को सन्दर्भमा अष्ट्रेलियामा नेपाली तथा एनआरएन अभियानको समग्र विषयमा रामजी बगालेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
यहाँ ओसियाना संयोजकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, हाल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
यहाँको प्रश्नको लागि धन्यबाद । मेरो नेतृत्वमा ओसियाना सम्मेलन र बिज्ञ सम्मेलन सम्पन्न गरियो । अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डको स्थानीय स्तरको एनआरएनएको सम्मेलन पनि सम्पन्न गरें । अव भानुआटुमा सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छु । उक्त मुलुकमा रहने जनसंख्याको कारणले अलि सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नु पर्नेछ । अष्ट्रेलिया आफैमा ठुलो देश हो र यस देशका ६ वटा स्टेटहरुमा शान्ति पुर्णरुपमा एनआरएनको निर्वाचन सम्पन्न भइैसकेका छन् । न्युजिल्याण्डमा सामान्य विवाद भए पनि सबै साथीहरुको सहमतिमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समस्या समाधान भईसकेको छ । अव हामी एनआरएनको ग्लोवल सम्मेलनको तयारीमा लागेका छौं । म यही एनआरएनए अभियान मै व्यस्त छु ।
व्यवसायिक बृत्तमा पनि यहाँको पहिचान राम्रो छ, व्यवसायिक रुपमा व्यस्त रहेर पनि एनआरएनको अभियानमा किन लाग्नुभयो ?
एनआरएनए अभियानमा लाग्नु भन्दा पनि यो दायित्वको कुरा पनि हो । हामी सबै नेपालीहरु आफ्नो मुलुक छोडिसकेपछि स्वतः एनआरएन हुन्छौं । बाहिर मुुलुकमा बसिसकेपछि संगठन पद्दती अनुसार आफ्नो देशको लागि केही गर्नको लागि नै यस अभियानमा सहभागी भएको छु । यस अभियानमा सहभागी भए पछि सामाजिक रुपमा एक खालको सञ्जाल विकास हुन्छ र सहकार्यको भावना पनि विकास हुन्छ । म एनआरएनए अभियानमा केही प्राप्त गर्ने भन्दा पनि देश र समाजलाई केही योगदान गर्न सकिन्छ भनेर लागेको हुँ । यो अभियानमा निरन्तर लागि रहेको छु । विश्व भरी छरिएर रहेका नेपालीहरुसंग एक प्रकारको सञ्जालमार्फत सम्पर्क बढ्छ । म लगायत सबै विदेशमा रहने एनआरएनए साथीहरु व्यस्त हुन्छन् । आफ्नो व्यस्तताका वावजुद पनि म यस अभियानमा निरन्तर लागिरहेको छु ।
तपाईले एनआरएनए अभियानमा लागेर गर्नुभएका कार्यहरु बिस्तृत रुपमा बताईदिनुस न ?
संगठनको जिम्मेवारीको हिसावले म अहिले ओसियाना संयोजकको रुपमा काम गरिरहेको छु । हालसम्म संगठनले विश्वास गरेर दिएका जिम्मेवारीहरु मैले पुरा गरेको छु । त्यसका अलावा सामाजिक रुपमा गर्नु पर्ने कामहरु पनि धेरै नै गरेको छु । एनआरएनको लिडरको रुपमा आफ्ना जिम्मेवारी अनुरुप आफुसँग भएका अनुभव र सीपहरु एक अर्कामा आदानप्रदान गर्ने र अरुसँग सिकेका सीपहरु आफु मातहतका साथीहरुसंग आदानप्रदान गर्ने साथै विभिन्न सभा सम्मेलन बैठक र गोष्ठीहरुमा सहभागी हुने कामहरु गरेको छु ।
ओसियाना संयोजक भईसकेपछि औपचारिक रुपमा संस्थागत हिसावले कुन–कुन ठाउँमा सहभागिता जनाउनु भयो ?
ओसियाना संयोजक भई सकेपछि प्रायः सवै क्षेत्रका बैठकहरुमा सहभागी भए । जानकारी प्राप्त भए सम्म एनआरएनए अभियानसंँग मेल खाने कुनै पनि प्रकारको क्रार्यक्रम छुटाएको छैन र सहभागी भए का कार्यक्रमहरुमा आफु र संगठनको तर्फबाट नै प्रतिनिधित्व गरेको छु । ओसियानाको नेतृत्व गरिसके पछि म एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको बैठकहरुमा दुई पटक गएँ, अमेरिका गएँ, त्यसै गरि नेपाली दाजुभाईहरुको एकदमै ठुलो चाप रहेको मध्यपुर्वका देशहरुमा पनि गएँ र अव अर्को हप्ता युरोप जाने तयारीमा छु । त्यसैगरि एनआरएनएको प्रधान कार्यालयमा हुने प्रत्येक पटकको भिडियो कन्फेरेन्स ब्रिफिङमा निरन्तर सहभागी भईरहेको छु । र बिभिन्न प्रकारका बिज्ञ सम्मेलनहरुमा सहभागी हुने गरेको छु भने संगठनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार मैले अष्ट्रेलियामा नै बिज्ञ सम्मेलन सम्पन्न गरेको छु । एनआरएनए अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदले सर्कुलर जारी गरेका सबै कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने गरेको छु ।
अव हुने ग्लोवल सम्मेलनमा भावी नेतृत्वको सवालमा यहाँको के छ योजना र तयारी ?
मानवीय स्वभाव नै हो एक पटकको एक पदको सफल कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेपश्चात निश्चय नै त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा काम गर्ने चाहाना हुन्छ । मैले ओसियाना संयोजकको हैसियतमा सफलतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेको छु । अव त्यही पदमा रहेर मैले गर्नु पर्ने कामहरु बाँकी छैनन् । अव निश्चित रुपमा यो भन्दा माथिल्लो संगठनको पद्दतिमा रहेर काम गर्न चाहन्छु । आगामी ग्लोबल सम्मेलनमा उपाध्यक्षको रुपमा रहेर काम गर्ने मेरो चाहना छ ।
आगामी नेतृत्वको लागि यहाँको तयारी कस्तो छ त ?
यो पहिलो चरणको चाहना मात्र हो । आफुले चाहँदैमा सबै विषयहरु पुरा हुन्छन् भन्ने छैन । यस सम्बन्धमा आफु भन्दा अग्रजहरु र साथीभाईहरुसंग सरसल्लाह गर्दै सुझव संकलनको काम गरिरहेको छु । अव आईरहेको युरोप क्षेत्रको मिटिङ सकेर अष्टे«लिया फर्केपछि ओसियाना क्षेत्रका सबै साथीहरुसंग एक प्रकारको अन्तरक्रिया गरेर सबैको राय सुझाव बमोजिम आधिकारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारीमा छु ।
यहाँको उपाध्यक्ष पदमा नै उम्मेदवारी किन र आगामी कार्य योजनाहरु के–के छन् ?
जिम्मेवारीको हिसावले सबै पदहरु उस्तै छन् । नेतृत्व जसले गर्दा पनि केही फरक पर्दैन तर पनि मानिसहरुको आ–आफ्नो कार्यदक्षता र आफुलाई फिट हुने पदको हिसावले मैले उपाध्यक्षको पद रोजेको छु । अहिलेको प्रतिष्पर्धात्मक जमानामा सबै साथीहरुको आईसीसीमा जाने चाहना पनि छ । किन सबै जना एउटै पदमा जुध्ने भनेर पनि म यो पद रोजेको छु । विधानत पनि उपाध्यक्षका पदहरु बढी छन् । अव आगामी बिधानले यस विषयलाई सम्बोधन गर्छ ।
वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले आगामी कार्यकाल नदोहो¥याउने घोषणा गर्नु भएको छ, यसमा यहाँको के धारणा छ ?
व्यक्तिगत रुपमा वर्तमान अध्यक्षज्यूसंग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ । कुनै पनि संगठनमा दुई वर्षको कार्यकाल भनेको एकदम छोटो हुँदो रहेछ । एनआरएनए अध्यक्षको लागी दुई वर्षको कार्यकाल काफी हँुदैन तर, पनि बैधानिक रुपमा हाम्रो संस्थाको निर्वाचन गर्नु पर्ने वाध्यता छ । वर्तमान अध्यक्षज्यूले सुरु गर्नुभएका कतिपय कामहरु पुरा भएका छैनन् । ती कामहरु पुरा गर्ने उहाँको चाहना हुँदाहुँदै पनि विधानमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाले निर्वाचन गर्नु पर्ने छ । यहाँ व्यक्तिगत रुपमा आउने जाने भन्दा व्यवस्था र प्रणालीले काम गर्ने विषयमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ । उहाँको आगामी कार्यकाल नदोहो¥याउने घोषणाले उहाँको उदारताको चौतर्फी सम्मान भएको छ । उहाँले नेतृत्वको विषयमा छाती फराकिलो वनाउनु भएको छ । यसकार्यले उहाँ लगायत संगठनको नै राम्रो छवि भएको छ ।
अव एनआरएनको कार्यदिशा कस्तो रहन्छ ?
कुनै पनि संस्था आफैंमा मुर्त चिज होईन । त्यो अमुर्त चिजलाई चलाउने भनेको प्रणाली नै हो । तर हामीले के पाएका छौं भने नेपालको राजनितिक संस्कार र कार्यशैलीकै तरिकाले हाम्रो कार्यालय पनि चलेको छ । जुन उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको संस्था हो सोही बमोजिम संचालन गरे राम्रो हुन्छ । पहिलो कुरो भनेको सचिवालय व्यवस्थित नभए सम्म काम गर्न असजिलो हुन्छ । एनआरएनए व्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्नको लागि सिस्टम बसाउनु पर्दछ । यहाँ पनि काम भन्दा कुरा बढी गर्ने प्रचलन छ । हामीले बिदेशमा सिकेको ज्ञान र सिप स्वदेशको लागी र स्वदेशको हितमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । यो भोलेन्टियर अर्गनाइजेसन हो । यसमा सम्भावना भएका सबै प्रकारका कामहरु हामीले गर्नू पर्छ । हामीले सिस्टम परिवर्तन गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले लगानी भित्र्याउन पहल गरिरहेको छ । देश र जनताको हितमा स्वदेशमा सामुहिक लगानीको वातावरण सृजना गर्ने कार्यमा मेरो प्रयास जारी रहनेछ । हामीले शुरु गरेका परियोजनाहरु सम्पन्न गर्नु पर्ने छ । कार्यालय व्यवस्थापनका कामहरु गर्नु पर्नेछ । सबै कामहरु व्यवस्थित तरिकाले प्रणालीगत हिसावले संचालन गर्ने वातावरण सृजना हुनेछ ।
गैर आवासीय नेपालीहरु भित्र पनि राजनितिक विषयले बढी बढावा पायो भन्ने आरोप छ नी, यसमा यहाको भनाई के छ ?
स्वभावले नै मानिस राजनितिक प्राणी हो । कतै न कतै संलग्नता हुन्छ होला । तर विषय के हो भने मानिसको जिम्मेवारी कुन स्थान के हो भन्ने विषय महत्वपुर्ण हो । सधैं भरी एउटै विषयले समान हैसियत र माने राख्दैन । म पनि पहिले कुनै राजनित आस्थासंग नजिक थिएँ होला तर म अहिले एनआरएनए बाहेक अरु होईन । म अष्ट्रेलिया गएको २४ बर्ष भयो म राजनितीज्ञ भन्दा पनि एनआरएनए हो । राजनितिक चेतना नभएमा अन्य विषयको ज्ञान हुँदैन । आफ्नो अधिकारको विषयमा थाहा पाउन र आवाज उठाउन राजनितिक चेतनाको आवश्यकता हुन्छ तर हाम्रो एनआरएनए बृत्तमा र यसको संरचनामा राजनितिक संरचना र अवधारणा खासै छैन । अर्को विषय भनेको एनआरएनए भित्रको राजनितिले देशमा खासै के नै अर्थ राख्छ र । राजनितीले एनआरएनएलाई बिगार्दैन ।
एनआरएनएलाई धनीहरुको मात्र संस्था हो भन्ने आरोप छ, यसलाई कसरी चिर्न चाहानुहुन्छ ?
मलाई यो आरोप निराधार लाग्छ । एनआरएनए आफंैमा भोलेन्टियर अर्गनाइजेसन हो । सामाजिक रुपमा काम गर्न र आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बचेको समय सामाजीक कार्यमा लगाउने हो । एनअनरएनएको धेरै अभियानहरु मध्ये स्वदेशमा लगानी गर्न लगानी जुटाउने सिलसिलामा विदेशमा रहेर बिभिन्न क्षेत्रमा ख्याती कमाएका व्यक्तिहरुसंगको सामिप्यता बढी छ । यसै विषयलाई आधारहिन तरिकाले प्रचार गर्नु त राम्रो भएन नी । सामाजीक क्षेत्रमा लागि सके पछि आमन्त्रण गरेको ठाउँमा जानै प¥यो, ट्राभल गर्नु पर्यो, होटेलमा बस्नु प¥यो यी सबै व्यक्तिगत खर्च हुन । ग्लोवल सम्मेलनहरुमा सहभागी हुनु प¥यो चुनाव प्रचार प्रसारमा खर्च हुन्छ । सामाजीक संजालको पहुँचले गर्दा भ्रमण गरेका फोटोहरु सार्वजनिक हुन्छन् । यस्कै आधारमा बिभिन्न देश घुम्ने, हिड्ने जस्ता विषयहरुलाई नै धनीहरुको संस्था भन्न कहाँ मिल्छ र ? हाम्रो अभियानमा धनी मात्र हैनन् विश्वका विज्ञहरु, चिकित्सकहरु, ईन्जिनियर, व्यपारी बौद्धिक व्यक्तिहरु समेत सहभागी हुनुले आरोप सही होईन । यो साझा संस्था हो । यो भित्र सबै प्रकारको सम्भावना छ ।
एनआरएनएको ग्लोवल कन्फेरेन्स नजिकिदै छ, यो कन्फेरेन्समा ठुलो आर्थिक चलखेल हुन्छ भनिन्छ नी ?
ग्लोवल कन्फेरेन्स आफु रहेको मुलुक भन्दा फरक मुलुकमा हुने भएकोले स्वभाविक रुपमा नियमित हुने खर्चहरु हुन्छन् नै । यात्रा गर्न, बस्न, खान लगायतका खर्चहरु नियमित खर्चहरु हुन । जो साथीहरु निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरुको निर्वाचन तयारीको लागि हुने साधारण खर्चहरु नै हुन । त्यस बाहेकको शिर्षक तोकिएको अरु ठुलो खर्च त हुँदैन । त्यही साधारण खर्च पनि जम्मा गरेर हेर्दा ठुलो भएको हो ।
यहाँले व्यवसायिक जीवन र सामाजिक जीवनलाई कसरी सन्तुलन गर्नुभएको छ ?
व्यवसायिक जीवन र सामाजिक जीवनलाईसँगै लैजान चुनौती छ । तर पनि व्यवसायिक व्यवस्थापन र समय व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । व्यवसाय आफैमा चुनौतीपुर्ण काम हो । त्यसमाथि सेवासंग सम्बन्धित छ भने त झन् सजग हुनु पर्छ । मेरो हकमा भन्ने हो भने व्यापार व्यवसाय चलिरहेको छ । तर व्यापारमा मात्र एकत्रित भएर लागे जस्तो कहाँ हुन्छ र सामाजिक अभियानमा लाग्दा व्यपारमा केही क्षति त हुन्छ नी । तर यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ आफैले व्यपार र सामाजिक कार्यक्रम संगसंगै अगाडी वढाउनु पर्दछ । समयलाई उपयुक्त तरिकाले ब्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
अगष्ट ३ र ४ मा ईटलीको रोममा हुने १२ औं युरोप सम्मेलनमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, अपेक्षा के छ ?
हजुर म १२ औं युरोप भेलामा सहभागी हुँदैछु । युरोप भनेको सबै भन्दा बढी एनसिसि भएको मुलुक हो । जहाँ २८ एनसिसि छन् । उक्त क्रार्यक्रममा हामी पनि सहभागिता जनाउन जाने हो । युरोपका साथीहरु ओसियाना आउने र एसिया प्यासिफिकका साथीहरु युरोप जाने भने सहकार्य र सहयोग नै हो । हामी पनि सोही बमोजिम युरोप जाँदै छौं । काठमाडौंमा त झन निर्वाचनको माहोल पनि तातिसकेको अवस्था छ । कार्यक्रमका उद्देश्यहरु भनेको बिभिन्न क्षेत्र अनुसार फक फरक हुन्छ । हाम्रो सहभागिता भनेको सवैको हात एक साथ हुनुपर्दछ भन्ने भावनाले म सहभागी हुन जाँदैछु । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कानुन मन्त्री अतिथीको रुपमा सहभागी हुनु हुनेछ र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको पनि आगमन हुँदैछ । यो कार्यक्रम हरेक दृष्टिकोणले अर्थपुर्ण छ ।
अन्त्यमा १२ औं युरोप भेलाको अवसरमा बिश्वभर रहनु भएका एनआरएनएहरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
सम्भवतः ग्लोबल कन्फेरेन्स अगाडिको यो अन्तिम भेला हो । यस कार्यक्रममा विश्वभर रहनुभएका एनआरएनएहरुको सहभागिता रहने छ । यो कार्यक्रम ईटालीको रोममा हुनगईरहेको छ । यस पावन अवसरमा सम्पुर्ण एनआरएनएहरु र आयोजकहरुलाई बिशेष धन्यबाद सहित कार्यक्रम सफलताको शभुकामना दिन चाहन्छु र काठमाडौंमा हुने ग्लोबल कन्फेरेन्समा सहभागी हुन सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु । कार्यक्रम सफल बनाउन आर्थिक, भौतिक नैतिक सबै प्रकारको सहयोगको लागि पनि अनुरोध गर्दछु । यो ग्लोबल कन्फेरेन्स कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम मात्र नभई हामी एनआरएनएहरु बिच एक अर्कामा भएका बिचार सीप आदान प्रदान गर्ने साझा चौतारो पनि हो । आफुले जाने का चित्त नबुझेका विषयहरु खुलेर छलफल गर्न र नितिनिर्माताहरुलाई आफ्ना समस्या उजागर गर्ने अवसर पनि भएकोले सहभागिताको लागि अनुरोध छ । म सम्पुर्ण एनआरएनए साथीहरुलाई ग्लोवल कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन आग्रह गर्दछु उक्त भेलामा सहभागी भएर हाम्रा सवै समस्याका विषयमा छलफल गरौं, सवै नेपाली एकै साथ रहौं एकता नै बल हो । हामी सवै मिलेर देश विकास गरौं । धन्यबाद
Posted By: 24 News Presson: June 26, 2019
एजेन्सी, ११ असार । अस्ट्रेलियाको एक घरमा आगलागी हुँदा तीन बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।
बुधबार बिहान साढे तीन बजेतिर न्यु साउथ वेल्स राज्यको एक घरमा आगलागी हुँदा ११ वर्षका बालक र पाँच वर्षका दुई बालिकाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ ।
बालकको शव घर भित्र पाइएको र उनका दुई बहिनीको भने अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ । यस्तै, छिमेकीले ८ वर्षकी बालिका र ३१ वर्षकी महिलालाई बाहिर सकुशल उद्धार गरेका छन् ।
एनआरएनए ओसेनीयाको सम्मेलनमा सहभागि हुन कानून मन्त्री ढकाल अष्ट्रेलिया प्रस्थान
Posted By: 24 News Presson: May 09, 2019
काठमाडौं:गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ओसेनीया क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ । सम्मेलनमा प्रदेश नम्बर ५ का प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्ती, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक समेत प्रस्थान गर्नुभएको छ । मन्त्रीसँगै काठमाडौंबाट एनआरएनए यूरोप संयोजक शिवकुमार बरुवाल पनि अष्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्ष कुल आचार्य, कुमार पन्त, महासचिव बद्री केसी, सहकोषाध्यक्ष सोम सापकोेटा, एनआरएनएन प्रवक्ता भूषण घिमिरे, यूरोपका संयोजक शिवकुमार बरुवाल, एनआरएन एसिया प्याशिफिक संयोजक किरण विक्रम थापालगायत सहभागि हुनुहुनेछ । सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ । सम्मेलन सिड्नीको हायात रीजेन्सी होटलमा हुनेछ । सम्मेलनमा २० मुलुकका तीन सय भन्दा बढीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा क्यानाडाबाट डा प्रमोद ढकाल, अमेरिकाबाट डा अम्बिका अधिकारी, अस्ट्रेलियामा क्रियाशील डा राजु अधिकारि, डा कुश श्रेष्ठ, डा कृष्ण हमाललगाएतले विभिन्न बिषयमा कार्यपत्र पेश गर्नुहुनेछ । ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ गरिन लागिएको सम्मेलन नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन कोशेढुंगा शावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन नेपालमा गैर आवासीय नेपाली र लगानी सम्बन्धी, प्रर्यटन प्रबद्र्धन तथा विदेशी ज्ञान, सिपलाई कसरी भित्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गरिनेछ भने दोस्रो दिन सिड्नी घोषणापत्र जारी गर्दै समापन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको एनआरएन ओसेनीया क्षेत्रीय संयोजक धर्मराज अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।
एनआरएन क्षेत्रीय सम्मेलन सिड्नीमा हुने
Posted By: 24 News Presson: May 08, 2019
अष्ट्रेलिया — प्रवासी नेपालीहरुको संगठन एनआरएनको ओसिनिया क्षेत्रको सम्मेलन सिड्नीमा आयोजना हुने भएको छ । ‘समृद्ध नेपालको लागि एनआरएन सदैव र सबैको लागि’ नारासहित आयोजना हुने कार्यक्रममा विभिन्न देशका दर्जंनौ प्रतिनिधीहरुले सहभागिता जनाउने भएका छन् । आउँदाे शनिबार र आइतबार आयोजना गरिने कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाका उच्च राजनीतिक नेताहरुका साथै नेपालबाट कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थिती रहने एनआरएनका ओसिनिया संयोजक धर्मराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकारीका अनुसार कार्यक्रममा अष्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री डेभिड कोलम्यान, एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्ष कुमार पन्त,कुल आचार्य, महासचिव बद्री केसीका साथै अन्य विभिन्न देशका एनआरएन प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहनेछ ।
कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरुमा दर्जन बढी कार्यपत्रहरु समेत प्रस्तुत गरिनेछ । आयोजकका अनुसार लगानी, पर्यटन र सृजना विषयमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया क्यानाडा लगायतका देशमा रहेका विज्ञहरुले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् ।
कार्यक्रमबाट निस्किएको निष्कर्षले एनआरएनलाई अघि बढ्न मार्गदर्शन गर्नुका साथै नेपालको विकासमा सघाउन समेत महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने संयोजक अधिकारीले दाबी गरे । उनले ओसिनिया क्षेत्रले समग्र एनआरएनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउँदै कार्यक्रमको माध्यमबाट नेपालमा कसरी लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत छलफल हुने बताए । सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य समृद्ध नेपालको लागि सबै प्रवासी नेपालीहरु सधैं अग्रसर रहेको सन्देश दिने रहेको समेत अधिकारीले सुनाए ।
अस्ट्रेलिया आउदै कुलमान, श्वेता र सविता
अमृत शर्मा / अस्ट्रेलिया सिड्नी,
अस्ट्रेलिया काम भन्दा पनि गफै दिएर जनतालाई भुसको बोरामा सुताउने प्रवृति चलिरहेको बेला हाम्रो देश नेपालमा केही व्यक्तिहरुले भने साच्चै नै देश र जनताका लागि ठुलो योगदान दिएका छन । तेस्तै राम्रो काम र कर्मले नेपालीको मन–मष्तिष्कमा बस्न सफल भएका व्यक्तित्वहरू हुन, कुलमान घिसिङ, स्वेता खड्का र सविता उप्रेती ।
राजनैतिक अस्थिरता र चर्को घुसिया प्रवृतिले गर्दा २१औं सताब्दीमा पनि लोडसेडिङका कारण अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका नेपालीलाई अनेकौं बाधा ( अड्चनका बाबजुत पनि आफ्नो एकल प्रयासद्वारा नै अन्धकारबाट छुटकारा दिलाउने महान व्यक्तित्व, उज्यालो नेपालका अभियन्ता एबं नेपाल बिधुत प्राधिकरणका महा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ अस्ट्रेलिया आउने भएका छन । गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) अष्ट्रेलियाको आयोजना, बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सि र आरकेएस अस्ट्रेलियाको मुख्य प्रायोजनमा हुन लागेको परोपकारी गाला डिनरका लागि उहाँ अस्ट्रेलिया आउन लाग्नुभएको हो । साथै सिन्धुपाल्चोकमा माझी बस्तीका लागि ५३ घर निर्माण गर्नुभएकी सामाजिक अभियन्ता, सफल ब्यबसायी एबं लोकप्रीय अभिनेत्री स्वेता खड्का र एसएसडीआरसी स्कूल स्थापना गरी अपाङ बाल बालिकाहरु लाई सेवा गर्दै उदाहरणीय बनेकी सविता उप्रेती पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ ।
प्रेरणादायी यिनै व्यक्तित्वहरुको उपस्थितिमा, सिड्नीको रगडेलमा रहेको इन्द्रेणी फङ्सन सेन्टरमा यही मे २६ का दिन च्यारिटी गाला डिनर हुने भएको छ । सो कार्यक्रमबाट उठेको रकमको आधा हिस्सा नेपालमा आपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालयलाई सहयोग गरिने र बाँकी रकम गैर आवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको समाज कल्याण कोषमा जम्मा गरिने छ । उक्त गाला डिनरको टिकट मुल्य ७० र १ सय डलर राखिएको छ भने विद्यार्थीलाई केही सहुलियत हुने आयोजकले बताएको छ । कार्यक्रमबारे एनआरएनए न्यु साउथ वेल्सका संयोजक नन्द गुरुङले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूको जीवन–संघर्ष र लगनशीलताका पाटाहरू हामी सबैका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ ।’ बिगतदेखि नै अस्ट्रेलियामा हुने अधिकांश कार्यक्रमहरुमा मुख्य प्रायोजकको रूपमा सहयोग पुर्याउँदै आएको ‘बाबा एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सी’ र ‘आरकेएस अस्ट्रेलिया’ का संचालक रविन्द्रकुमार शर्माले यस्तो परोपकारी कार्यक्रम गरी आफूले सामाजिक दायित्व पूरा गर्न पाउनु गौरवको कुरा रहेको बताउनु भयो ।